Nkọwapụta --lọ ọrụ - TopJoy Industrial Co., Ltd.
TOPJOY, otu ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ ọrụ na azụmaahịa, na-anya isi na nka na-enweghị atụ n'inye ngwaahịa ngwaahịa ahụike, nkecha na eco-enyi na enyi, ọkachasị SPC isiike Vinyl flooring, okomoko Vinyl, PVC Commercial Vinyl flooring, SPC Wall Deco Panels na wdg.
Na mgbakwunye na ịnye ngwaahịa kachasị mma dị taa, anyị gbalịsiri ike ịnapụta ọrụ dị elu. Ndị otu anyị zụrụ azụ, raara onwe ha nye na-agbasi mbọ ike n'ụzọ niile. Di iche iche nke ndi anyi bu ihe kachasi nma anyi ma uru ha bu ihe di mkpa nke TopJoy. Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ iji hụ na azụmahịa ọ bụla na-eme nke ọma na ndị ahịa ọ bụla nwere afọ ojuju ọ bụghị naanị na nzụta ha, kama yana ahụmịhe zuru ezu ha.
Anyị kwenyere na nkwado ma anyị na-akwado atụmatụ ndị na-eme ka mmata gburugburu ebe obibi dị mma. Idebe iwu gbasara gburugburu na iwu gburugburu ebe obibi dị anyị oke mkpa na mpaghara ebe anyị na-ahụ ohere ndị ọzọ nke imeziwanye, anyị na-agba mbọ imekwu.
Na afọ 2019, Shanghai Topjoy Industrial Co., Ltd, webatara na Jiangxi Gilardino Building Materials Technology Co., na-akanye a ọhụrụ Milestone nke ụlọ ọrụ mmepe kwupụta professionalization na internationalization na ụwa resilient flooring ụlọ ọrụ.
Anyị ozi - na-TRUSTABLE & pụrụ ịdabere na soplaya n'ime flooring ụlọ ọrụ
Spc Water Proof Vinyl Flooring , SPC Vinyl Ft , Spc Vinyl Plank Flooring , Spc Floor Tiles, Spc Wood Tiles Flooring , Spc Planks,